Sawir cusub oo xaday oo ka mid ah Motorola One Vision ayaa xaqiijiyay dhowr faahfaahin | Androidsis
Wax badan ayaan ka maqalnaa Motorola One Vision maalmihii la soo dhaafay. Telefoonka casriga ah booqday Geekbench ka dibna faahfaahintiisa faahfaahsan ayaa ku soo baxday internetka.
Hadda, a Mid ka mid ah war-saxaafadeedka u muuqda mid rasmi ah, kaas oo muujinaya qaabkaaga oo muujinaya taariikhda imaatinkaaga ee suurtogalka ah. Aynu eegno.
Sawirkaani wuxuu noogu yimid xushmad Mobiles Tiger. Waxay muujineysaa taas taleefanka ayaa leh shaashad daloolin leh kamaradda sawirka, kaasoo ku yaal geeska bidix. Bandhigu wuxuu leeyahay biro yar yar oo bidixdiisa, midigtiisa, iyo dusheedaba, oo leh garka isbarbar dhiga weyn.
Dhanka dambe ayaan u dhaqaaqeynaa, waxaan leenahay qaab laba-jibbaar ah oo meel taagan oo bidix ah oo leh labo-LED toosh ah oo hoose. Kaamirooyinka sidoo kale waxay leeyihiin qoraal dhanka midigta, iyagoo xaqiijinaya in midkood uu noqon doono a 48 xayeysiis MP.
Dhabarka taleefanka casriga ah, oo u muuqda inuu leeyahay dhammaystir dhalaalaya, sidoo kale waxaa ku yaal iskaanka sawirka faraha oo leh astaanta bateriga ee Motorola iyo, hoos u sii socota, waxaan haynaa nooca loo yaqaan 'Android One' oo xardhan.
Waxyaabaha kale ee aan ka ogaan karno sawirkan ayaa ah One Vision ayaa la imaan doonta dekedda USB-C, kaas oo la dhigayo salka oo ay hareera socdaan afhayeen iyo makarafoon. Ma aragno qalabka dhageysiga dhagaha, laakiin mahadsanid sawirrada xaday ee Motorola P40 (noockeeda Shiinaha) waan ognahay in korka la saaray.
Motorola's Moto Z4 Play ayaa imanaya - hadda wuxuu helayaa shahaadada FCC
One Vision waxay leedahay booska kaarka SIM-ka oo ku yaalo dhanka bidix, lehna mugga giraanta iyo badhanka awoodda midigta. Shaashadda qufulka taleefanka ayaa taariikhaysan 3-da Abriil, oo ah goorta ay rasmi noqon karto. Waxa kale oo aad ka arki kartaa badhanka u qaabeysan kaniiniga xagga hoose, taas oo tilmaamaysa taas taleefanka ayaa socon doona Android Pie isla markiiba. Intaas waxaa sii dheer, Hal-aragga ayaa lagu soo waramayaa in laga billaabi doono Latin America, India iyo Brazil, iyada oo P40-na uu gaar u yahay Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Soo bandhigida cusub ee Motorola One Vision waxay xaqiijineysaa shaashadeeda daloolka iyo kamarada 48 MP
Samsung Galaxy Buds way fududahay dayactirkiisa